Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ)
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ ပါဝင်တဲ့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါလို နာကျင်ခြင်းမျိုး ရှိချင်မှရှိပါလိမ့်မယ်။
အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်လျှင် သင့်မျက်လုံးထဲမှာ အလင်းရောင်ပြိုးပြိုးပြက်ပက်များ၊ အကွေ့အကောက်လိုင်းများ၊ ကြယ်များကို မြင်နေပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကလည်း ထင်ယောင်မြင်မှား ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ သင့်မြင်ကွင်းရဲ့ တစ်နေရာရာကို မမြင်ရတော့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်လူနာ ၅ယောက်မှာ ၁ယောက်ဟာ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ လက္ခဏာများခံစားနေရပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ သင့်ရဲ့ စာရေး၊ စာဖတ်၊ ကားမောင်းစတဲ့ အလုပ်များလုပ်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေတတ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာများဟာ ယာယီသာဖြစ်လို့ စိုးရိမ်စရာတော့ မရှိပါဘူး။
အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါကို မြင်လွှာထိခိုက်သော ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါနဲ့မှားတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီရောဂါနှစ်ခုဟာ မတူပါ။ မြင်လွှာထိခိုက်သော ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါဟာ ရှားပါးပြီး မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးတစ်ဘက် မမြင်ရတော့ခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်လို့ အကြောင်းရင်းကိုသိဖို့ ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အမြင်အာရုံထိခိုက်စေသော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
မျက်လုံးတစ်ဘက်မှာ လျှပ်စီးလက်သလို အလင်းရောင်များမြင်ခြင်း၊ သင့်မြင်ကွင်းထဲက တစ်နေရာကို မမြင်ရတော့ခြင်း၊ မျက်လုံးတစ်ဘက် လုံးဝမမြင်ရတော့ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံထိခိုက်စေသော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါဟာ အခြားအမျိုးအစားတွေနဲ့မတူဘဲ မျက်လုံးတစ်ဘက်ကိုသာ ထိခိုက်စေပါတယ်။ လျှပ်စီးလက်သလို အလင်းရောင်များမြင်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံထိခိုက်ခြင်းတို့ကို မျက်လုံးတစ်ဘက်တည်းမှာဖြစ်သလား နှစ်ဘက်လုံးမှာဖြစ်သလား ခွဲခြားပြောနိုင်ရန်မလွယ်ပါ။ မျက်လုံးတစ်ဘက်စီကို တစ်လှည့်စီအုပ်ပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ချိန်ဟာ ၄နာရီမှ ၇၂နာရီ အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။
အခြားလက္ခဏာများကတော့ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အလင်းရောင်/ဆူညံသံတို့ကို မခံနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပညာရှင်များပင် အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းကို သေချာမသိပါ။ အချို့ကလည်း မျက်လုံးအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မြင်လွှာရှိသွေးကြောလေးများ ကျဉ်းခြင်း၊ မြင်လွှာရှိ အာရုံကြောဆဲလ်များ ထိခိုက်ခြင်းကြောင့်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါးဒီရောဂါရှိသူ အချို့မှာ မျက်လုံးတစ်ဘက် လုံးဝကွယ်သွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ/အတက်ရောဂါကုသဆေးများဟာ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိ မသိကြပါ။ သင့်မှာ အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါရှိနေလျှင် ရောဂါအလိုလိုသက်သာသွားသည့်တိုင် ဆရာဝန်နှင့်တော့ သွားရောက်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က ရောဂါလက္ခဏာများ အကြောင်းမေးပြီး မျက်လုံးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါမယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့
Amaurosis fugax, လို့ခေါ်တဲ့ သွေးစီးဆင်းမှုမကောင်းသဖြင့် မျက်လုံးတစ်ဘက်ယာယီကွယ်သွားခြင်း၊ မျက်လုံးကို သွားတဲ့သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ခြင်း၊ မြင်လွှာကိုသွားတဲ့ သွေးကြောကျဉ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Giant cell arteritis, လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကြောရောင်တဲ့ ပြဿနာကြောင့် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြဿနာများနဲ့ မျက်စိကွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အခြားသွေးကြောဆိုင်ရာ ပြဿနာများကတော့ ခုခံအားစနစ်ဖောက်ပြန်တဲ့ ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အတိုင်းသွေးမခဲနိုင်တဲ့ အခြေအနေများ ဥပမာ၊ sickle cell disease, polycythemia
စသည်တို့ ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါမယ်။
Ocular migraine (အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မိနစ်၃၀အတွင်း သက်သာသွားလေ့ရှိတဲ့အတွက် အများစုက ကုသရန် မလိုပါ။ လုပ်လက်စအလုပ်ကို ရပ်လိုက်ပြီး အမြင်အာရုံပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သည်အထိ မျက်လုံးကို အနားပေးလိုက်ပါ။ ခေါင်းကိုက်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်ပါ။
အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါကို ကာကွယ်ကုသဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေတဲ့ သုတေသန အနည်းငယ်သာရှိပါသေးတယ်။ သင့်ဆရာဝန်ကတော့ ဆေးတစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပိုပြီးပေးပါလိမ့်မယ်
Amitriptyline, nortriptyline စတဲ့ စိတ်ကျရောဂါအတွက် ဆေးများ
Beta blocker သွေးပေါင်ကျဆေးများ
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် အမြင်အာရုံနှင့်ပတ်သတ်သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Ocular migraine. https://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/ocular-migraine-basics#2. Accessed November 1, 2017
Ocular migraine. https://www.healthline.com/health/causes-of-ocular-migraines#treating-and-coping8. Accessed November 1, 2017